Ngaba UThixo Uphulaphula Yonke Imithandazo? | Imibuzo YeBhayibhile Iyaphendulwa
INQAKU ELINGUMXHOLO Iphonografi​—Iyingozi Okanye Akunjalo?
IBHAYIBHILE IYABUTSHINTSHA UBOMI BABANTU “Ndaqalisa Ukucinga Ngekamva lam.”
OUR READERS ASK Kutheni Abanye Abantu EBhayibhileni Bengachazwanga Ngamagama?
SONDELA KUTHIXO “Iimpawu Zakhe Ezingabonakaliyo Zibonwa Ngokucacileyo”
XELISA UKHOLO LWABO Wasindiswa “Nabanye Abasixhenxe”
FUNDA NGOLUNYE ULWIMI ISepedi ISpanish Isi-Iloko Isi-Indonesia Isi-Itali IsiAlbania IsiAmharic IsiArabhu IsiArmenia IsiAymara IsiBhulu IsiBicol IsiBulgarian IsiCatalan IsiCebuano IsiChichewa IsiCreole saseHaiti IsiCroatia IsiCzech IsiDangme IsiDanish IsiDatshi IsiEfik IsiEstonia IsiEwe IsiFinnish IsiFrentshi IsiGa IsiGeorgia IsiGreenland IsiGrike IsiGuarani IsiHiligaynon IsiHungary IsiJamani IsiJapan IsiKazakh IsiKikuyu IsiKinyarwanda IsiKirghiz IsiKirundi IsiKorea IsiKwangali IsiLingala IsiLithuania IsiLuo IsiMalagasy IsiMyanmar IsiNgabere IsiNgesi IsiNorway IsiNzema IsiPapiamento (saseCuraçao) IsiPersi IsiPhuthukezi IsiPolish IsiQuechua (saseBolivia) IsiRashiya IsiRomania IsiSerbia IsiSerbian (saseRoman) IsiShona IsiSinhala IsiSlovak IsiSlovenia IsiSranantongo IsiSuthu (Lesotho) IsiSwahili IsiSwedish IsiTagalog IsiTahiti IsiTelugu IsiThai IsiTigrinya IsiTshayina SaseMandarin (Esenziwe Lula) IsiTshayina SaseMandarin (Esiqhelekileyo) IsiTsonga IsiTswana IsiTurkish IsiTwi IsiUkrainian IsiUruund IsiVietnam IsiWayuunaiki IsiXhosa IsiYoruba IsiZulu isi-Igbo
Ngaba uThixo uphulaphula yonke imithandazo?
UThixo uphulaphula abantu beentlanga zonke. (INdumiso 145:18, 19) ILizwi lakhe iBhayibhile, lisicebisa ukuba sithandaze ngayo nantoni na esihluphayo. (Filipi 4:6, 7) Sekunjalo, eminye imithandazo uThixo akayithandi. Ngokomzekelo, akayithandi imithandazo enkqayiweyo nephindaphindwayo.—Funda uMateyu 6:7.
Kwakhona, uYehova akayithandi imithandazo yabantu abamona ngabom. (IMizekeliso 28:9) Ngokomzekelo ngamaxesha okubhalwa kweBhayibhile, uThixo akazange ayimamele imithandazo yamaSirayeli ayenetyala lokubulala. Kuyabonakala ke ukuba sifanele senze okuthile ukuze siviwe nguThixo.—Funda uIsaya 1:15.
Sifanele senze ntoni ukuze uThixo asive?
Ngaphandle kokholo asikwazi ukuthandaza kuThixo. (Yakobi 1:5, 6) Sifanele sikholwe ukuba ukho yaye usikhathalele. Sinokuba nokholo oluqinileyo xa sifunda iBhayibhile, kuba ukholo olunjalo lufumaneka kuphela eBhayibhileni.—Funda amaHebhere 11:1, 6.
Simele sizingise yaye sizithobe xa sithandaza. KwanoNyana kaThixo uYesu, wayezithoba xa ethandaza. (Luka 22:41, 42) Kunokuba sixelele uThixo oko amele akwenze, sifanele siqonde imithetho yakhe eseBhayibhileni. Ngoko sinokuthandaza ngokuvisisana nokuthanda kukaThixo.—Funda eyoku1 kaYohane 5:14.